Kunze Switchyard (Substation), China Kunze Switchyard (Substation) Vagadziri, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Imba>Products Supplier>Yakazara Seti yeMechanical uye Magetsi Equipments>Kunze Switchyard (Substation)
Nzvimbo iyo switchgear yebooster station inogamuchira uye inogovera simba remagetsi rinogadzirwa kubva kune hydro-jenareta seti, uye yakakwira-voltage magetsi ekugovera mudziyo inopa simba kune gidhi kana poindi yekuremedza mushure mekuwedzera. Iyo inoumbwa neshanduko, switchgear, yekuparadzanisa switch, mutual inductor, mheni inosunga, bhasibar mudziyo uye yakabatana chivakwa chivakwa. Inoparidzirwa pamusoro pechinhambwe chakareba kuburikidza ne switchyard.
Inogona kukamurwa kuita mapoka maviri: ekunze uye emukati magetsi ekugovera zvishandiso zvinoenderana nenzvimbo yekuisa yemagetsi emagetsi. 110kV uye 220kV midziyo yemagetsi yakarongwa muchirimwa kana yasanganiswa nehunhu hwemagadzirirwo echiteshi chemagetsi emvura, uye nzvimbo dzakasiyana-siyana dzepakati idiki pane dhizaini yekunze, saka nzvimbo idiki zvakare. Mutengo wekuvaka wehurumende wakakwira kupfuura marongero ekunze, uye nguva yekuvaka yakareba, asi haina kukanganiswa nemamiriro ekunze akaipa. Dzimwe nguva kuitira kuderedza mari yekuvaka, chikamu chemidziyo ichiri kuiswa kunze kwechirimwa.
Sumo pfupi yechimiro cheiyo boost switch station:
1. High-voltage Circuit Breaker: Inogona kugura uye kubatanidza iyo isina-mutoro uye inotakura mitsetse yemutsara uye zvakasiyana-siyana zvemagetsi emagetsi apo hurongwa huri kushanda zvakanaka; Kuti udzivise kuwedzera chiyero chetsaona, Inogona kubatirana nerelay garandi kuti ikurumidze kugura chikanganiso chazvino kana sisitimu yakundikana;
2. Yakakwira-voltage Isolation Switch: Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwe-high-voltage midziyo yemagetsi nemidziyo inoita basa rekuzviparadzanisa pakati pemasekete panguva yebasa rekugadzirisa, switch yekuzviparadzanisa inogona chete kuvhura nekuvhara iyo isina-mutoro wedunhu, uye haina. vane arc yekudzima basa;
3. Current Transformer: Inoshandura high current kuita yakaderera ikozvino proportionally. Rutivi rwekutanga rweshanduko yazvino yakabatana kune yekutanga system, uye chikamu chechipiri chakabatana nekuyeresa zviridzwa, relay kuchengetedza, nezvimwe;
4. Voltage Transformer: Nechinangwa chekudzivirira, metering, uye chiridzwa, inoshandurwa yakakwira voltage kuita mwero wechipiri voltage ye100V kana kuderera zvinoenderana nehukama hwepakati;
5. Mheni Arrester: Iyo inoshandiswa kuchengetedza zvakasiyana-siyana zvemagetsi mumagetsi emagetsi kubva pakukuvadza kunokonzerwa nemheni overvoltage, kushanda overvoltage, uye simba frequency transient overvoltage. Iyo inosunga inowanzobatanidzwa pakati pewaya mhenyu uye pasi, iyo yakabatanidzwa mukufanana nemidziyo yakadzivirirwa.